China Blister Kurongedza Hydraulic Press Kugadzira uye Fekitori | Kangpa
Blister Kurongedza Hydraulic Press
• Iyo otomatiki yekudyisa yekucheka muchina inoshongedzerwa neyakagwinya, iyo inogona kudzikisa basa uye kuwedzera kugadzirwa kwekuita. Iyo ina-ikholamu mbiri-humburumbira chimiro chinogamuchirwa.
Chimiro, kuzadzisa yakakwira matoni kucheka uye chengetedza simba rekushandisa. Pamusoro peiyo chaiyo mana-murwi wekucheka muchina, imwe-mativi kana maviri-mativi.
• Iyo yekumusoro otomatiki yekudyisa chishandiso inovandudza kushanda pamwe nekuchengeteka kwemuchina chishandiso, uye inowedzera iko kugadzirwa kushanda kwemuchina wese nemaviri kusvika matatu.
• otomatiki yekudyisa yekucheka muchina inokodzera blister indasitiri, indasitiri yemitoro, kugadzirwa kweganda, shangu indasitiri, kupakata indasitiri, matoyi.
Kucheka mashandiro ehukuru-kufa uye akakwira kufa kune maindasitiri, zvinyorwa, mota indasitiri, nezvimwe.
1. Zvirongwa zvinonzwisisika zvine hungwaru kudzora uye kubata skrini inoratidzira inogona kumisikidza uye kudzora kushanda kumanikidza, kucheka kudzika uye kumhanyisa kumhanyisa kumhanya, Iko kuvhiya kuri nyore, nekukurumidza uye kwakanyanya.
2. Bilateral orbital yekudyisa sisitimu inowedzeredza kushanda kwebasa, uye iko kudyisa kurongeka kuri +/- 0.05MM.
3. Makirinda maviri emafuta, makoramu mana otomatiki chiyero chinobatanidza chimiro chetsvimbo, kuona kuti kudzika kwekucheka kwenzvimbo yega yega yekucheka zvakangofanana.
4. Kana bhodhi rekucheka rikadzvanya pasi nekubata banga rekucheka, rinobva racheka zvishoma nezvishoma, kuitira kuti parege kuva nesipi yekukanganisa pakati pechikamu chekumusoro kwepamusoro nepasi pechinhu chekucheka.
5. Iyo yepakati otomatiki lubrication system inosimbisa iko kurongeka kwemuchina uye inovandudza kusimba kwemuchina.
6. Iyo mbiri yemafuta wedunhu yekumanikidza yekudzora sisitimu inogadzikana, nekukurumidza uye yakasimba.
7. Iyo yekutsveta mukombe manipulator inogona kudzikisa basa uye kuwedzera kugadzirwa kwekuita.
8. Chero ipi inoshanda saizi yekushanda, kumanikidza, nezvimwe zvinogona kugadzirwa.
* Yakasiyana magadzirirwo uye mamodheru anogona kuve akagadzirwa zvinoenderana akasiyana akasiyana vatengi. Chigadzirwa hunhu uye mifananidzo ndeya referenzi chete, ndapota taura nesu kuti uwane ruzivo.
Pashure: Puri inopisa inyauka inonamatira laminating muchina TH-101B
Zvadaro: Puri inopisa inyauka inonamatira laminating muchina TH-101A
Blister Kucheka Muchina
Blister Packaging Kucheka Muchina
Blister kurongedza Machine
Blister kurongedza Machine Zvikamu
Flat hydraulic yekucheka muchina
Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi, Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Anonyorera, Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa, Pur Hot Melt guruu Nonwoven Laminating Machine,